The Guide From Semalt: Nzira Yokubvisa Referral Spam Kubva kuGoogle Analytics
Kuchengetedza kwekutumira spam sevashanyi vepanzvimbo yepamutemo vakasvibisa mharidzo yakaitwa neGoogle Analytics. Pane imwe nguva, Google yakanga iri kutarisa nyaya yacho, pasina kuuya neimwe sarudzo.
Dambudziko redu nderokuti vanhu havazivi kuti kutumira spam ndekupi, kuti vanoiona sei, uye kuti vangaurasa sei. Icho chinokonzera ngozi yakawanda kumabhizimisi pavanotanga kushandisa mishumo isina kururama kuti vaone kuparidzira kwavo kwekutsvaga kwekuwedzera kutendeuka kwehuwandu, kusarudza kugadziriswa, kuburitsa peji peji, nezvimwe zvakawanda. Mune zvimwe zviitiko, vatengesi vanoramba vachipa dhiyabhorosi kumakurukota avo, izvo zvingave zvisiri pamusika kusvika kusvika 60 muzana.
Alexander Peresunko, nyanzvi ye Semalt anotsanangura zvinoshandiswa kutumira spam, nzira yekuzviziva, ndezvipi nzira dzekubviswa kwekutumira spam kubva kuGoogle Analytics, uye kuti ungadzivisa sei mamiriro aya kuti asadzoke zvakare - exemple feuille de paie.
Vamwe ve spam havakwanisi kutarisisa nzvimbo yacho uye inowanzonzi "Ghost" spam. Zvisinei, inoramba ichinyorwa mumishumo sevheti yepamutemo inobatsira kugadzirisa mararamiro, kutendeuka, nguva pachigaro, uye zvikamu zvakakwana pakati pevamwe. Bhizinesi guru, iro rinonyora zvirongwa zvakawanda zvingasaona ichi sechinetso chikuru. Kune makambani maduku, zvisinei, ichi chikonzero chokuzvidya mwoyo. Inogona kuverenga pamusoro pemakumi matanhatu ezana emasangano ezuva nezuva izvi zvinoshandiswa pamwedzi wekubika, kuongorora kweA / B, nekumwe kuchinja kwekuyera.
Chikonzero nei data iyi isingashanyi pawebsite asi inoratidza kuG GA inokonzerwa neMeasurement Protocol, yakagadzirwa neGoogle. Iyo inotevedzera tsika dzevatengi kubva kune dzimwe nzvimbo dzisingazivikanwe uye dzinotungamirira kuGoogle Analytics. Zvisinei, inozarura magonhi ekunyengera kwepamameri anoshandisa dambudziko rekutsvaga nekurwisana nemitemo yekutsvaga UA, nokudaro kupfurikidza newebsite..
Kuziva Kufuratira Spam
Iyi ndiyo nzira dzakawanda dzekutsvaga kutsvaga spam, asi inokurumidza ndeye "Kuwana" tab kuti uone "Zvose zvekutengesa", uye ipapo inobva kune imwe nzvimbo. Kana munhu asingakurumidze kuona spammy site, kudarika URL muchirwere ichi kunofanira kusimbisa kusava nechokwadi kwose. Kunyange zvakadaro, vamwe vanoparadzi vakawana zvakanyanyisa, saka vachitarisa bounce mazinga, mapeji / sendima, uye zvitsva zvidzidzo zvemasangano zvakarewo pfungwa yakanaka. Kana ivo vari pa100%, iyo motokari haifaniri kushanyira nzvimbo.
Kubvisa Traffic Fake kubva kuGoogle Analytics
Nzira yakarongwa inoshanda 100% yenguva pane zvose zvekare uye zvitsva. Iyo chete inobata ndeyokuti inoda nguva dzose zvinyorwa sezvo zvitsva zvitsva zvinowedzera. Hakuchina kugadzirisa kusingaperi, zvichida kusvikira Google inopa imwe.
Gadzira kopi yemufananidzo uripo unofanirwa kuramba usiri usina kuonekwa uye usina kufanana nehutano hwekuchengetedza kana zviyero zvinoshandiswa zvinyorwa zvakajeka. Zvinyorwa izvi zvinodzivirira zvose zvese zvinotevera zvinoshandiswa kuva nekutumira spam. Kana iri yekutanga firiji, tora pa Admin, sarudza iyo yakasvibiswa maonero, uye isa zita rakasarudzwa re filter sezvo zvingada mamiriyoni. Mumwe anofanira kusarudza Sarudza, uye sarudza Campaign Source. The Filter Pattern ndiyo inoshandiswa firiji.
Kuchenesa Dhahara dzekare dzeGoogle Analytics
Mumwe anogonawo kubvisa spam kubva kumigumo yezvinyorwa achishandisa imwe tsika tsika. Tevera matanho aya: tsvaga pane Kuwana, All Traffic, Source / Medium. Kamwe chete ipapo, chengeta Chikamu Chewedzera, uye + Nzvimbo Itsva. Mushure mokunge wapedza zvinyorwa zvakakodzera, chura sai.
Kutora Hondo Yevarume veSpammers
Hapana chinhu chinopikisa A / B site pane zvinopfuura zvinyorwa zvisina kururama. Izvo hazvisi kusvikira Google ichitsvaga sarudzo yakagadzirisa dambudziko rakasimudzwa nekutsvaga spam. Pari zvino, mitemo inoratidzwa pamusoro apa inoshanda sevatungamiri vakanakisisa pakuvimbisa kuti Google Analytics haina kutumira spam.